मिशन फ्रन्टलाइन अपरेशन -टु| Janachaso Khabar
चिसो मौसम। आकाशमा कालो बादल यताउता लुकामारी गरिरहेका थिए। पहाडका चुट्टीहरूलाई आफ्नो पकड बनाएर बाक्लो कुहिरोहरू मडारिदै थिए। हावाका झोक्काहरूले बाक्लो कुहिरोलाई तितरवितर बनाई दिन्थ्यो। छिनभरमै कुहिरोहरू पुन जोडिन्थे। यस्तो लाग्थ्यो एकतामा बल हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिन खोजिरहेछन् कुहिरो। तरबितर बनाउने र जोडिने काम गर्दै हावा र कुहिरोहरू दोहोरी खेलिरहेका थिए।
म छतमा बसेर चिया पिउँदै त्यो दृश्यको चरम आनन्द लिँदै थिए। म टी इन्थुसिईस्ट। चिया खुबै पिउँथे। चिया पिउँदा चुरोट खुबै पिउँछु म। टेबलमा भएको सूर्य ब्रान्डको एक खिली चुरोट झिकेर सल्काएँ। चिया एक चुस्की पिएर एक सर्को चुरोट तान्दै टाउको आंशिक आकाश तर्फ मोड्दै धुवाँ आकाश तिर फाल्छु। धुवाँका साना डल्लाहरू आकाश तिर गएर केही माथि पुगेपछि हावामा विलीन हुन्छन्। यही क्रमलाई केही छिन् निरन्तरता दिन्छु। कपमा भएको चिया पनि खतम हुन्छ। चुरोट पनि फिल्टरमा आईपुग्छ। सबै स्मोकरहरूको अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ "लास्ट पब इज बेटर देन थाउजेन्ड पब।" लास्ट पब तानेर चुरोटलाई यस्ट्रेमा कच्याककुचुक पार्छु। मौसम झन् चिसो हुन्छ। यहाँको मौसम यस्तै थियो। कति खेर पानी पर्छ, कति खेर घाम लाग्छ पत्तै हुँदैन। यत्तिकै आकाश गर्जेर सिमसिम पानी पर्न सुरु गर्छ। म रूम तिर झर्छु।
बिहानको त्यस्तै ८ बजेको हुँदो हो। हेडक्वाटरबाट फोन आउँछ। हस्पिटल जान रेडी हुनु । गाडी अबको ३० मिनेटमा आइपुग्छ त्यहाँ। खाना खाएर तयार भएर बस्नु। हामी फ्रन्ट लाइन अप्रेसनको लागि स्ट्यान्ड बाई थियौँ। हस्पिटल भन्ने बित्तिकै थाहा भईहाल्यो। आज पनि कसैको कोरोना बाट मृत्यु भएछ। दुई दिन अघि मात्र एकजनालाई बिदाइ गरेर आएका थयौँ। आज पुन: जानको लागि तयार हुनुपर्ने आदेश थियो। कति भयावह, कति निर्दयी बनेर आयो कोरोना। एकछिन् त मन खिन्न हुन्छ। तर के गर्नु, हाम्रो ड्यूटी थियो जसरी नी जानै पर्ने।
साविकको भन्दा आज अलि छिटो खाना तयार गर्न आग्रह गरे मैले कुकम्यानलाई। आज पनि लास व्यवस्थापन गर्न जाने हो सर? उसले प्रश्न तेर्साउँछ। उम.. भनेर म रुममा आएर समान मिलाउन थाल्छु। सेनिटाइजर मेशिनमा हाल्छु। मास्कहरू रेडी गर्छु। एकछिन् पछि ८ वर्षकी सानी बहिनी दृष्टि खापुङ लिम्बु आएर खाना रेडी भएको जानकारी दिन्छिन्। होटल बसाईको क्रममा मेरो नजिकको मिल्ने सानो साथी। खुबै जिस्काउँथे म दृष्टिलाई। मलाई बच्चाहरू खुब मन पर्छ। दृष्टि सँग बोल्दा, जिस्किदाँ मलाई मेरो भान्जीको याद आउँथ्यो त्यसैले म खुब जिस्किन्थे दृष्टिसँग।
हामी सबैले गएर खाना खायौँ। हामीलाई जति सक्दो चाँडो गर्नु थियो। केही छिनमै हाम्रो गाडी पनि आई पुग्यो। गाडीबाट सबै इकुपमेन्टहरू निकालेर रूममा गएर सबै जना पिपिई(पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट) सेट लगाउन शुरू गर्‍यौँ। हातमा सेनिटाइज गरेर फर्स्ट लेयरको सर्जिकल ग्लभ्स लगाएँ, पुन: हात सेनिटाईज गरेर पिपिई(पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट) सेट, दुई ओटा सर्जिकल मास्क, एउटा एन 95 मास्क, सर्जिकल क्याप, गगल, फेस सिल्ड, सेकेण्ड लेयर ग्लभ, प्लास्टिकको जुराफ, सुज, थर्ड लेयर ग्लभ अनि लास्टमा गाउन लगाएर रेडी भयौँ। अपरेसन गर्ने डाक्टरको जस्तो थियो हाम्रो हुलिया तर हाम्रो अपरेसन भने बिल्कुल फरक थिए। अपरेसन, अपरेसन नै थियो तर हाम्रो काम फरक। सम्झिँदा कटक्क मन दुख्थ्यो। कसैलाई यसरी बिदाइ गर्न नपरोस् भनेर भगवानसँग प्राथना गर्थेँ। तर नचाहँदा नचाहँदै गर्नै पर्ने कस्तो बाध्यता। त्यही भएर बेला बेलामा घरमा फोन गरेर सम्झाउथेँ। सञ्चै छौ भनेर जानकारी दिन्थे घरबाट। एक किसिमको सकुन मिल्थ्यो त्यो उत्तरले।
सबै तयार भईसकेपछि गाडी चढेर अस्पताल तिर हुइँकियौँ। कोरोनाको धेरै केसहरूले गर्दा अस्पताल सँधै व्यस्त नै देखिन्थ्यो। नर्सहरू हतारमा यताउता कुदिरहेको हुन्थे। डाक्टरहरू पनि एक वार्डबाट अर्को वार्डमा आवतजावत गरिरहेका हुन्थे। आफ्नो देशको स्वाभिमान बचाउन बाहिर मुलुकसँग युद्ध लडिरहेको सिपाहीको कथा भन्दा एक रत्ति फरक छैन डाक्टर र नर्सहरूको कथा। एउटा सिपाही अन्तिम घडीमा बरु मर्न तयार हुन्छ तर आफ्नो स्वाभिमान बेचेर आत्मसमर्पण गर्दैन। हो त्यस्तै, डाक्टर र नर्सहरू पनि बरु आफ्नो ज्यान बाजी राखेर परिवारसँग टाढा रहेर बिरामीको सेवा गर्न रातदिन तयार, तर भावनामा बहेर बिरामीलाई कदापी छोड्दैनन् थिए। हाम्रा यस्ता योद्धाहरूलाई मेरो हृदयदेखि सलाम छ। तर, पनि कहिलेकाँही यस्ता महान् योद्धाहरूलाई छि:छि, दुरदुर गरेको समाचारहरूले कटक्क मन पोल्छ। मान्छे हो भगवान त हैन नी, राम्रो काममा सपोर्ट अनि नराम्रो भएको बेला सही बाटोमा हिँड्न प्रोत्साहन गरौँ नकी हुलदंगा र आन्दोलन हैन।
हामी अस्पताल पुगेपछि गाडीबाट ओर्लिएर आवश्यक सामानहरू गाडीबाट झार्‍यौँ। अस्पतालले गर्नु पर्ने सबै काम सकेर हामीलाई हाम्रो टास्कको अनुमति दिएपछि टास्क सुरु गर्न डेड बडी भएको स्थान तर्फ एडभान्स भयौँ। डेड बडी त्यही थियो, जहाँ हामीले पहिलाको डेड बडी मेनेजमेन्ट गरेका थयौँ। सबै भन्दा अघि म थिएँ। सबै भन्दा पहिला उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै आफूले गर्नुपर्ने कामलाई अघि बढाए। सेनीटाइजर मेसिनबाट स्प्रे गरेर एरिया र बडीलाई डिस्इन्फेक्टेड गरे। त्यसपछि हाम्रो टिमले बडीलाई बोक्न मिल्ने गरेर टाउको, कम्मर र खुट्टामा नाईनलको डोरीले बानेर शव बहान तर्फ लगे। म पनि सबै एरियामा पूर्णरूपमा सेनीटाईज गरेर बाहिर निस्केँ।
मृतक ३२ वर्षका रहेछन्। विवाहित, श्रीमती सहित २ बालबालिका। सानो कोठा लिएर बस्दा रहेछन् सदरमुकाममा। तर कोरोनाका कारण जिल्ला अस्पतालमा अल्पायुमै जीवनबाट बिश्राम लिएका थिए। माध्यमिक तहको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा भन्ने पुस्तकमा ४ जनाको परिवारलाई सानो परिवार सुखी परिवार भनेर लेखिएको थियो। तर यो लेखिएको थिएन, श्रीमानको मृत्यु पछिको त्यो परिवारलाई के भनिन्छ? लेखिएको छैन तर अब लेखियोस् अनि उचित किसिमको सहयोग होस्।
मन चसक्क दुख्छ। म त अविवाहित नै छु। तर त्यो परिस्थितिको मर्म नबुझ्ने चाहिँ हैन। सानासाना नानीहरूको अब पालनपोषणमा कति कठिनाई होला आमालाई। जीवनसँगै जिउने कसम खाएर वैवाहिक जीवनमा गाँसिएका दम्पती, यसरी आधा जिन्दगी मै चटक्क छोडेर जाँदा श्रीमतीको मन कस्तो भयो होला? आफ्नो आस्थाको धरोहर यसरी बीचैमा भाँचिदा आमा बाको मन कति बेचैन हुँदो हो। कसैको मृत्युवरणमा शत्रुले शोक मनाउँछ रे। उसको मृत्युले सबै जना दुःखी थिए।
उहाँ मगर समुदायको हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले नदीको दोभानमा दाह संस्कार गर्नुपर्ने कुरा उहाँहरूको आफन्तले जानकारी दिनु भयो। सोही मुताबिक हामी दोभान तर्फ लाग्यौ। जाँदै गर्दा बाटैमा रैछ उहाँ बस्ने कोठा। त्यहाँबाट उहाँले प्रयोग गर्ने लुगा फाटाहरू निकालेर गाडीमा हाल्यौँ र दोभान तर्फ ओरालै ओरालो हुइकियौँ। हजुरआमाले भनेको कुरा यहाँ पनि लागु भयो। उता घरमा आफन्त रुँदै थिए सँगै मौसम पनि रुँदै थियो। दिन पुरै धमिलो भएको थियो। मलामी आफन्तहरू बाइकमा पछ्याई रहेका थिए। लगभग डेढ घण्टाको सफर पछि हामी दोभानमा पुग्यौँ। आफन्तहरू अन्तिम संस्कारको लागि चिता तयार गर्न दाउरा खोज्न लागे। पानी परेको हुनाले खोला पुरै धमिलो थियो अनि आफ्नै रफ्तारमा बग्दै थियो। सँगै उहाँको इच्छा चाहनाहरू पनि। उता नदीमा माछा मर्ने मान्छेहरू माछा मार्दै थिए। पापी पेटको सवाल छ यहाँ। उसले पनि जीवन गुजारा गर्नु छ। सायद मनमनै हार्दिक श्रदान्जलीको कामना गर्‍यो। उसलाई देख्दा लाग्थ्यो उसको सहरा थियो त्यो पेशा, जीवन जिउने आधार थियो। उ आफ्नै काममा व्यस्त थियो। यता चिता तयार भइसकेको थियो। उहाँको आत्मा त पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुगी सकेको थियो सायद। केवल भौतिक शरीरलाई ससम्मान बिदाई गर्न बाँकी थियो जसको पूर्व सन्ध्यामा थयौँ हामी। हामीले काम अघि बढायौँ।
शववाहनबाट शव निकालेर एउटा ठाउँमा राख्यौँ र अन्तिम सलामी दियौँ। शवलाई तयार पारिएको चितामाथि राख्यौँ। उहाँले प्रयोग गर्ने सबै कपडाहरूलाई पनि त्यहीमाथि राखीदियौँ। एकजना आफन्तले चामल र अगरबत्ती शिरमाथि राखी दिनु भन्दै दिनुभयो। त्यो शिरमाथि राखिदिएर उहाँहरूलाई बाँकी कामका लागि अनुमति दियौँ। त्यसपछि उहाँको आफन्तले दागबत्ती दिनुभयो। चितामाथि आगो बल्न शुरू भयो। हामीले लगाएका पिपिई(पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट)सेट खोलेर बलिरहेको आगो माथि राखिदियौँ।
पसिनाले शरीर निथ्रुक्क भिजेका थिए। सिरिरि हावा चल्यो। केही राहत महसुस भयो। उता चितामाथि आगो जलिरहेको थियो यता आफन्तहरूको मन। सबैका आँखाहरू रसाएका थिए। मन गरुङ्गो भयो । अन्तत्वगोत्त उहाँको भौतिक शरीरको पनि समाप्त भयो। सबै काम सकिए पछि हामी उहाँहरू सँग फर्कने अनुमति लिएर फर्क्यौं। सहयोग गरी दिनु भयो धन्यवाद छ है हजुरहरूलाई। धन्यवादको मिठो शब्दले हामीलाई बिदाइ गर्नु भयो।
हाम्रो काम नै यस्तै थियो। हरेक परिस्थिति सँग जुध्नलाई तयार हुनु पर्ने। उकालो चढ्दा दिउँसोको २ बजिसकेको थियो। कोठामा आएर नुहायौँ। एकछिन् पछि खाजा खाएर बेडमा पल्टेर भुसुक्क निदाएछु। बेलुकी खाना खाने समयमा ब्यूँझिएछु। खाना खाएर घरमा फोन गरेँ। आमाले फोन उठाउनु भयो। दिउँसोको सबै वृत्तान्त बताएँ अनि सुरक्षित बस्नु भनेर सम्झाएँ। आमा आमा नै हुन् चाहे छोरा कसैको किन नहोस्। उसको बारेमा नालीबेली सोध्न लाग्नु भयो। थाहा भएको सबै बताई दिएँ। आमा पनि भावुक हुनु भयो मेरो कुरा सुनेर। यस्तो काममा छु भन्दा आमा झनै भावुक हुनु भयो। आमालाई सम्झाएँ। केही छिन बोलेर फोन राखेँ।
समय फरक छ। माहोल तनाव छ । सबै जनालाई सकेसम्म घरमै बस्न अपील गर्छु। सामाजिक दुरी कायम गरेर कामहरू गर्न अनुरोध गर्छु। सकेसम्म आफूलाई सुरक्षित रहेको आभास दिलाउन अनुरोध गर्छु। रुममा आएर एकछिन् मोबाइल चलाएर भोली फेरी कतै अर्को अपरेसनमा जानु पर्छ कि भन्ने हेक्काले निन्द्रादेवीको काखमा लुटपुटिन पुग्छु।
जनचासो खबर| असार ९, २०७८ बुधबार